Nosakanan’i Shina ny Clubhouse rehefa niady hevitra momba an’i Xinjiang sy Tiananmen ny mpisera aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2021 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, English, Español, Ελληνικά, English
Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Tamin'ny 8 Febroary, nosakanan'i Shina ny Clubhouse, ilay tambajotra sosialy tsy mampiasa afa-tsy rakipeo avy any Etazonia ary ampiasain'ny mpisera ao amin'ny tanibe hiresahana lohahevitra saropady ara-politika lavitra ny mason'ireo mpanivan'ny governemanta.
Nanomboka tamin'ny taona 2020, Clubhouse no tranonkalan'ny tambajotra sosialy nitombo haingana indrindra manerantany, izay efa mihoatra ny 2 tapitrisa ankehitriny. Afaka manokatra efitra fifanakalozan-dresaka manokana ho an'ny namana ireo mpisera na miditra amin'ny efitra fifanakalozan-dresaka hitan'ny daholobe misy olona miisa hatramin'ny 5.000. Amin'ny alàlan'ny fanasana ihany no ahafahana miditra amin'ilay fampiasa ary amin'ny iOS irery ihany koa.
Na dia tsy hita ao amin'ny Apple Store any Shina aza dia mbola afaka mitroka ilay fampiasa ny mpisera ao amin'ny tanibe rehefa manova ny toerana misy ny telefônin'izy ireo. Voalaza fa amidy ao amin'ny Taobao, tsena an-tserasera, eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 50 dolara Amerikana ny kaody fanasana.
Tao anatin'ny fotoana fohy no nandavahan'ny Clubhouse ny Rindrin'Afo Lehibe, ary tamin'ny faran'ny herinandro teo ny ankamaroan'ireo famoaham-baovaon'ny media no nahatsikaritra ny fisian'ny efitra firesahana antsoina hoe “Misy toby fitanana ve i Xinjiang?” (新疆 有 個 集中營？ sy ny hoe “Ry namako avy any Tibet sy Xinjiang, te-hanasa anao hiresaka izahay” (「西藏 跟 新疆 的 朋友 ， 我們 想找 你們 過來 聊天」).
Tao amin'ireo efitra roa ireo, naharitra ora maro ny resaka. Nilaza ny mpisera sasany fa manana fianakaviana voatazona ao amin'ny tobin'ny fanabeazana ao Xinjiang izy ireo na nilaza fa miaina anaty tahotra sy fanaraha-maso. Na dia maro aza ireo tia tanindrazana an-tserasera no nampametraka ahiahy momba ny maha-azo itokisana ireo fijoroana vavolombelona ireo dia naneho fangoraham-po kosa ny ​​Shinoa Han sasany, ary indraindray nahatsapa ho meloka noho ny tsy fahafahany nanao na inona na inona hanovana ny toe-draharaha. Betsaka no nilaza fa tohina nandre ny fijoroana vavolombelona izy ireo.
Samy tao amin'ny efitra “Misy toby fitanana ve ao Xinjiang?” ilay mpanolotra an-drakipeo Sinica, Kaiser Kuo sy ny tonian-dahatsoratry ny China Affarid ao amin'ny The Economist, Gady Epstein. Namintina ny dinika tao amin'ny Twitter i Kuo:
Mbola mitohy ao amin'ny Clubhouse ity dinika amin'ny teny Shinoa momba an'i Xinjiang ity. Andiam-panehoan-kevitra eto ambany. Nisy olona iray nanontany raha toa ka voahidy ao ny 20% -n'ny Shinoa Han, noterena hiteny ny Uyghur, sns, ahoana hoy ny Shinoa Han momba izany ? Mahavariana
Manana efitra fifanakalozan-dresaka hafa ihany koa ny Clubhouse miresaka lohahevitra toa ny zava-nitranga tany Tiananmen tamin'ny taona 1989, ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong, ny feminisma, ny fikatrohana ho an'ny tanora, ankoatra ny olana hafa.
Tsy nahasarika ny sain'ny fampitam-baovao vahiny fotsiny ihany ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Clubhouse, fa ny fampitam-baovaom-panjakana Shinoa Global Times ihany koa, izay nanonona ilay mpitari-kevitra ao amin'ny Weibo izay nilaza fa “azon'ny mpisintaka ao Hong Kong sy ireo Tibetana ampiasaina ny fomba fijeriny ara-politika ary lasa sehatra fanehoan-kevitra anti-Shina iray hafa” ny tambajotra sosialy.
Mpaneho hevitra marobe no efa niandry fa ho voasakana any Shina ihany no hiafaran'ny Clubhouse. Nilaza i Badiucao, mpanakanto ara-politika, izay navitrika niadihevitra tao amin'ilay fampiasa fa toy ny “lavaka fivoahan'ny rivotra amin'ny vilany cocotte minute” io sehatra io raha niresaka tamin'ny mpanao gazety mahaleotena William Yang izy:
… tabataba izay ren'izao tontolo izao. Na izany aza, tsy fantatsika hoe rahoviana no hanidy ity fivoahan-drivotra ity ny tàna-ben'ny governemanta ao Shina. Na manao ahoana na manao ahoana, asehony fa tsy mivoaka moramora tahaka ny fiheveran'ny governemanta Shinoa azy ny zava-misy ao anatin'ilay vilany.
Taorian'ny nanidian'ny governemanta Shinoa ilay “fivoahan-drivotra”, nanomboka niresaka ny paikady hamoronana toerana tsy voasivana ho an'ny fifanakalozana matotra amin'ny olana ara-politika eo amin'ireo samy mpisera Shinoa avy amin'ny faritra samihafa ireo rehetra nijanona tao amin'ny Clubhouse.
Manahy ihany koa ny mpisera sasany hoe tsy atahorana ve ilay sehatra satria amporisihany ny fisoratana amin'ny tena anarana ary takiana ihany koa ny fidirana amin'ny (lahatahiry) angona manokan'ilay mpisera, toy ny angonan-diantanana ara-peo sy ny fifandraisana. Ny sasany kosa naneho ny ahiahiny fa an'ny Agora, orinasa any Shanghai ny API Clubhouse.
4 ora izaySingapaoro